Kitra - Fitantanana Barea :: Alentiky ny vokatry ny fanadihadian’ny FMF i Nicolas Dupuis • AoRaha
Kitra – Fitantanana Barea Alentiky ny vokatry ny fanadihadian’ny FMF i Nicolas Dupuis
Sarotsarotra ho an’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy, taranja baolina kitra, ny hanohy ny asany am-pitoniana. Maro ireo antony hanamarina izany, amin’ireo trangan-javatra niseho tato ho ato.
Sesilany ny fitakiana ny fialan’ity teknisiana frantsay ity avy tamin’ireo mpitantana ny federasiona, tamin’ny herinandro. Mandentika an’i Nicolas Dupuis, ohatra, ny vokatry ny fanadihadiana nataon’ny fiadidiana teknika nasionalin’ny baolina kitra, izay nanambara fa “tokony haverina hojerena ny fahaizamanaon’itsy mpanazatra itsy”. “Mila mpanazatra avo lenta sy efa nitantana klioba avo lenta ny mpilalao malagasy fa tsy teknisiana mbola tsy nitondra ekipa goavana tany ivelany”, hoy hatrany ny tatitry ny fiadidiana teknika.
Lohalaharana amin’ireo tranga manamafy ny fihozongozon’ny sezan’i Nicolas Dupuis ny tsy fahombiazan’ny Barea tamin’ireo lalao roa noheverina hahazoana tapakila hiatrehana ny CAN 2021 (Etiopia sy Nizera) tamin’ny andro farany tamin’ny lalaombondrona. “Efa tany Kamerona ny tongotra ilan’ny Barea saingy nanaisotra izany indray no nataon’izy ireo tany Toamasina, nanoloana an’i Nizera”, araka ny nambaran’ ny teknisiana iray.
Nanomboka teo dia maro ireo mpankafy sy mpitantana ary teknisiana niloa-bava fa “tokony hametra-pialana i Nicolas Dupuis na hoesorina amin’ny toerany”. Vao teo am-pisafidianana mpilalao dia efa sahirana ity mpanazatra ity. Tapitra nantsoina avokoa ireo mpilalao avy tany ivelany sy ireo teto an-toerana, izay nahatratra roa amby telopolo. Tsy natokisany anefa ireo mpilalao avy eto antoerana na dia nampiseho ny fahaizany aza ry Razafindrabe Rajo na Berajo sy Razafindrasata Tsito, isan’ireo notsapatsapainy tany Toamasina. Maro ihany koa ireo mpilalao avy any ivelany nantsoina hatrany nefa tsy hampilalaovina akory.
Ankoatra izay, isan’ny mahabe resaka ny maro ny fisehoan’ity teknisiana ity amin’ ireo karazana dokambarotra maro eto Madagasikara, izay ambaran’ny olona fa “mahavariana azy”. “Efa mahazo karama be izy saingy toa hadinony ny tena asany amin’ny maha mpanazatra nasionaly azy. Tsy mba misy fitiliana eny ifotony, toy ny nataon’i Peter Schnittger fahiny ataony, fa izay klioba manasa azy hijery lalao ihany no atrehany”, hoy ny mpitantana klioba iray. “Tsara aminy ny miala satria tonga hatreo amin’ny fetran’ny fahaizany izy”, hoy hatrany ity farany. Misy ihany anefa ireo mpilalao, toa an-dry Andrianantenaina Abel Anicet sy Nomenjanahary Lalaina na i Bôlida maniry ny hitazonana azy, tamin’ny fanehoan-kevitra nataon’izy ireo tamin’ny pejy Facebook. Mizara roa ihany koa ny hevitr’ireo mpankafy ao amin’ity tambajotrantserasera sosialy ity, taorian’ny nivoahan’ny feo fa “haato vonjimaika izy”. Tantara mitohy ny momba an’i Nicolas Dupuis sy ny ho aviny ao amin’ny Barea.
Judo – Tompondakan’i Afrika :: Handefa mpikatroka dimy any Sénégal ny Malagasy
Fanefitry ny covid-19 – Baraingo ny fisoratana anarana amin’ny fanaovam-baksiny